सस्तो3+ 1 अक्ष सीएनसी हाइड्रोलिक प्लेट प्रेस ब्रेक - Bambeocnc
गुण र क्यारेक्टरहरू
1. इस्पात वेल्डेड संरचना, कंपन द्वारा तनाव को उन्मूलन, उच्च यांत्रिक शक्ति, र असाधारण कठोरता;
3. सिङ्क्रोनाइजेसन र उच्च परिशुद्धता को बनाए राखन को लागि यांत्रिक रोक;
4. ब्याक स्टप दूरीको लागि बिजुली समायोजन, म्यानुअल ठीक समायोजन, र डिजिटल डिस्प्ले स्ट्रोक फिसिङ गर्दै।
मोडेल संख्या: WD67K-125T / 3200 हाइड्रोलिक प्लेट प्रेस ब्रेक
1. UG (परिमित तत्व) को प्रयोग, कम्प्यूटर सहायक डिजाइन को माध्यम ले, राम्रो उपस्थिति संग।
2. मेशिन संरचना इस्पात प्लेटसँग वेल्डेड छ, पर्याप्त शक्ति र कठोरता संग। हाइड्रोलिक ड्राइवले शीट मोटाईको परिवर्तन वा कम मस्तिष्कको खराब विकल्पको कारणले गर्दा गम्भीर ओभरलोड सञ्चालन दुर्घटनाहरूबाट मशीनलाई रोक्छ। यसको अतिरिक्त, यस मेशिन को कार्य को स्थिरता, संचालन को सुविधा, र विश्वसनीय सुरक्षा द्वारा विशेष रुप देखि प्रदर्शित छ।
3. मेकनिक ब्लक फिक्सिंग सटीकता सुनिश्चित गर्न को लागी तेल सिलेंडर मा सुसज्जित छ जब स्लाइडर तल मृत बिंदु को यात्रा गर्छन र यसैले भारी उत्पादन मा झुकाव कोण को स्थिरता को आश्वासन दिइन्छ।
4. आन्तरिक तनाव समाप्त गर्न जर्मन प्रविधि प्रयोग गर्दै।
5. जंगली र छिटो एन्टिकोरोवेटिभ पेन्टबाट मुक्त गर्न स्ट्राइकिंग ग्रिट प्रयोग गरेर सम्पूर्ण फ्रेम।
कार्य स्लाइडर संरचना
1. यो मिसिन हाइड्रोलिक बिजुली नियंत्रण संग सुसज्जित छ, स्वतंत्र रूप देखि समायोज्य स्लाइडर यात्रा र इंचिंग, अर्ध स्वचालित, माड्यूल परीक्षण र समायोजन को लागि सुविधाजनक स्वत: परिचालन मापदंड।
2. माथिल्लो चरण प्रकार मोन्डिङ डिजाइन, जोडा तेल सिलिन्डरहरू सँगसँगै काम गर्दै, सन्तुलित सञ्चालन, सुविधाजनक र सुरक्षा।
बिजुली नियन्त्रण प्रणाली
1. इलेक्ट्रिक घटक र सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय मानक, सुरक्षा र विश्वसनीय, लामो जीवन, र बलियो एन्टिङ् बजाउने क्षमतासँग सम्झौता गरिन्छ।
2. फुडपाड संलग्न गरिएको।
3. उच्च ग्रेड प्रसिद्ध विद्युतीय नियंत्रण घटक छनौट।
4. मिसिनको शक्ति 3-चरण र 4-लाइन AC380V हो, नियन्त्रण पाश AC220V हो।
5. मोटरको मुख्य पावर तरिकाले लोड भन्दा कम शर्ट सर्किट छ, चरण सुरक्षाको कमी छैन।
6. नियन्त्रित बटनहरू मेनु बटन बटन, बिजुली स्विच, पायलट लैंपमा बिजुली बक्सहरूमा सुसज्जित छन्।
7. मेशिनको कुल बटनको रूपमा तेल पम्प रोक्ने बटन, जब तेल पम्प बिजुली बन्द हुन्छ, सम्पूर्ण मेसिनले काम गरिरहेको छ।
8. नियन्त्रण नियन्त्रण बटन र आपातकालीन स्टप बटन मेशिनमा स्थापना गरिएको छ।
9। विन्डोज मेनेजरको स्लाइडर यात्राको सिंक्रोनाइजेसन मेकनिक सिंक्रोनस इकाई यो सरल, स्थिर र विश्वसनीय ढाँचामा यो मेनुको आवश्यक तुल्यकालिक परिशुद्धता संग हुन्छ। र सामान्यतया, यो लामो समयको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जब प्रायः पुन: मरम्मत गर्न आवश्यक पर्दैन।
पंच र मर